Okungahlanganiswa: Ukuletha Esithembisweni Sokwenza Okuthandwa Nguwe | Martech Zone
Isithembiso sokwenza kube ngokwakho sehlulekile. Sekuyiminyaka sizwa ngezinzuzo zayo ezingakholeki, futhi abathengisi abafuna ukuzizuzela kuyo bathenga izixazululo ezinamanani futhi eziyinkimbinkimbi, kepha ukuthola kuphela sekwephuze kakhulu ukuthi, iningi, isithembiso sokwenza okuthandwa nguwe singaphezu kwentuthu nezibuko.
Inkinga iqala ngokuthi ukubukwa kwenziwe kanjani. Ibekwe njengesixazululo sebhizinisi, yenziwe ngohlaka lokuxazulula izidingo zebhizinisi lapho ukwenza ngezifiso okwangempela kufanele kube mayelana nomuntu (uma lokho kuzwakala kusobala, kungenxa yokuthi kunjalo). Ukufaka igama lomuntu ku-imeyili akusizi izidingo zabo. Ukubalandela ku-inthanethi ngesikhangiso sento abayibuke kusayithi lakho akusizi izidingo zabo. Ukulinganisa okuqukethwe kwekhasi lakho lokufika ayengakwenza bakhonze izidingo zabo, kepha hhayi uma uhlelo oluyisekelayo lunezikhala zemininingwane ezinqunyelwe nokuphathwa okungalungile kokuqukethwe, izingqinamba ezivamile ezisekela iningi lezingqinamba ezenziwe ngezifiso amabhizinisi akhubeka.
Ngayinye yalezi zindlela ifana nokuthengisa kwedijithali okulingana nenkohliso eshibhile, futhi amakhasimende akho awagcini ngokubona kuphela, ayabacasukela. Kepha kukhona umhlaba lapho ukwaziswa okwaziswa, okwenziwe ngokwezifiso kunikeza inani elengeziwe langempela kumakhasimende, liwasize athole, acwaninge, futhi athenge izinto zawo kalula eziteshini eziwafanele kakhulu.
Imvamisa, ama-brand azibandakanya necebo elenziwa ngokwezifiso ngaphambi kokuba babe sesimweni sokulenza liphumelele. Ukuphupha okukhazimulayo kobhasikidi abakhulu nokuphinda amakhasimende kushiya iqiniso elibuhlungu: ngaphandle kwendlela eqinile yedatha kanye nokwakhiwa kwedijithali okungasekela okuhlangenwe nakho kwe-omnichannel okususwe amandla, iphupho liyoke libe njalo. Kepha akufanele kube ngale ndlela. Ukwenza ngezifiso kungaphumelela.
Ngakho-ke singasuka kanjani kokuhlangenwe nakho okushiya amakhasimende ezizwa engenandaba (okungcono kakhulu) aye kulokho okubaxhumanisa nalokho abakufunayo nini nokuthi bakufuna kanjani? Ngokuhlanganiswa okulungile kobuchwepheshe namasu.
Yenza Idatha Yakho Isebenze
Okokuqala nokubaluleke kakhulu, amabhizinisi adinga ukuhlelwa kwedatha yawo. Qaphela ukuthi angishongo abathengisi badinga ukuhlela idatha yabo kepha amabhizinisi esewonke. Abathengisi abaningi banemininingwane ehlanzekile futhi ehlelekile. Kuyafana nakonjiniyela bemikhiqizo, amaqembu okubeka uphawu, kanye nengxenye ngayinye yenhlangano enokufinyelela kocezu lwayo lwedatha.
Okuhlangenwe nakho kwamakhasimende kuphela akuhlali kuma-silos amancane acocekile futhi acocekile; kwenzeka kuwo wonke amazinga futhi ngaso sonke isikhathi. Ukulindela ukuqonda mayelana nemikhankaso yokuphindisela emuva yokwazisa lonke ulwazi lwamakhasimende ngumdlalo wobuwula. Ukuze ukwenziwa komuntu kusebenze, kudinga ukuthi kwakhiwe kuwo wonke amava, hhayi ucezu olulodwa nje lwayo.
Lokho kusho ukuthi ibhizinisi lakho lidinga ukuthola umbono owodwa wekhasimende kuyo yonke indawo yokuthinta. Amapulatifomu Wedatha Yamakhasimende (Ama-CDP) kuhle kulokhu, nozakwethu othembekile onjengo I-Myplanet ingakusiza ukunquma ukuthi iyiphi i-CDP elungele izidingo zakho futhi ikusize uyisebenzise. Ngokudiliza ama-silos wedatha omnyango wakho, uzoqala ukuthola umbono ophelele wokuthi imizwa yekhasimende lakho ibukeka kanjani, kusukela ekugcineni kuze kube sekugcineni. Ukwenza ngezifiso namuhla kuhweba ngezindaba zamakhasimende ezihambisanayo isikhathi esiningi, kepha iqiniso akuvamile ukuthi liqonde ngqo.
Uzodinga futhi ukuqinisa idatha yakho yesikhathi sangempela (I-RTD) izicelo. Nge-RTD, uzoqinisekisa ukuthi ulwazi ngokwalo luthuthukisiwe — kuqinisekisa ukuthi imininingwane yomkhiqizo isesikhathini futhi nemisebenzi yokucinga isebenza ngokusemandleni — kodwa yingxenye ebalulekile yokwakha indlela yokwenza ngezifiso phansi kulayini. Izenzo zamakhasimende kusiteshi esisodwa kufanele zikwazi ukuqala ukusabela komkhiqizo kunoma yisiphi isiteshi, kufaka phakathi naleso ababekuso, futhi lokho kungenzeka nge-RTD kuphela.
Ukuletha idatha eyengeziwe yomkhakha kungakusiza ukuthi uthathe okuhlangenwe nakho ube isinyathelo esengeziwe, futhi. Imininingwane yokumaketha ezungeze amatemu wokusesha ingasiza ekunqumeni hhayi kuphela amagama ajwayelekile kakhulu amakhasimende akho awasebenzisayo ukuthola imikhiqizo oyifunayo kodwa futhi namagama ahambisanayo azihlanganisa nemikhiqizo, ezosiza lapho usukulungele ukwenza ngokwezifiso isipiliyoni ngezincomo zomkhiqizo .
Futhi ekugcineni, kubalulekile ukufaka idatha yomkhiqizo wakho endaweni eyodwa. Ukuqinisekisa umuzwa ikhasimende elinawo ku-inthanethi elifana nalolo ebelizoligcina, kuhlelo lokusebenza, lisebenzisa itiyoski elizimele, likhuluma ne-Alexa, noma enye into okungenzeka ukuthi umkhiqizo wakho uxhumana nezithameli zakho kuyo, udinga ukuthi ube nayo ngalinye lalawo maphoyinti wokuthinta axhumeke kuhabhu yedatha emaphakathi. Futhi, phansi ulayini lapho usukulungele ukuhlela uhambo lwamakhasimende olwenziwe ngezifiso, idatha evumelanisiwe iyoba umgogodla walokho okwenzekile.
Kwenze kube Modular
Ukusebenzisa idatha ngempumelelo kuzosiza ukwenza isipiliyoni sibe sihle, kepha ukwenza idatha isebenze kahle kakhulu futhi uqinisekise ukuthi uletha isipiliyoni sokungqongqoza kuzo zonke iziteshi, kufanele ucabangele ukuqeda isipiliyoni sakho. Ukwakhiwa okungenakhanda (ukuqeda isipiliyoni sakho sangaphambi kokuphela kohlaka lwangemuva) akuyona eyabo bonke abantu, kepha kwabaningi uhlaka lwe-modular luyindlela engcono kakhulu yokuhambisana nesilinganiso soshintsho lwezobuchwepheshe.
Ngaphandle kobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu obunika amandla ingxenye ngayinye yesipiliyoni, kungaba nzima ukuyisa lolo lwazi ezingeni elilandelayo nge-orchestration. Ukuhlawulisa uhambo lwamakhasimende kusuka ekusebenzisaneni kokuxoxa okubalethe kumkhiqizo wakho, kulwazi oluku-inthanethi lapho bafunda khona kabanzi ngemikhiqizo yakho, futhi ekugcineni ekuthengeni ngaphakathi nohlelo kunzima kakhulu ukukwenza uma usebenza nge-monolithic back -end engadlali kahle kwabanye.
Yenziwe i-Myplanet inikeza uhlaka lwe-modular olukuvumela ukuthi usebenzise kakhulu okuhlangenwe nakho kwakho kwe-ecommerce. Isebenzisa amaphethini we-ecommerce afakazelwe kanye nobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu, Okungahle kwenziwe kukuhlomise ngamathuluzi wokwenza isisombululo se-omnichannel sangempela esingafinyelela isithembiso sokwenza ngezifiso: idatha exhunywe ngokuphelele ukukusiza ukunquma okuqukethwe okufunwa amakhasimende akho; ukuphathwa kokuqukethwe okuguqukayo ukukuvumela ukuthi uhambise lokho okuqukethwe ezigabeni zezethameli ezifanele; kanye nesisekelo sezakhiwo zokwakha ukuze ukhule nebhizinisi lakho, uzivumelanise namathuba emakethe amasha njengoba evela.
Ama-Monoliths anendawo yawo, futhi uma iminikelo yabo yenzeka ukuze ihambisane nezidingo zakho ngokuphelele, uzoba sesimweni esihle. Kepha njengoba indawo iguquka, kunzima kakhulu ukubona ukuthi isixazululo se-monolithic sizoqhubeka kanjani ukuhlinzeka konke okudingwa ngumkhiqizo ukuze kuphumelele, futhi sikunikeze ezingeni eliphakeme kakhulu elitholakala emakethe. Ikhono lokukhetha nokukhetha izixazululo eziza nohlaka lwama-modular lisho lapho okuthile kushintshela ibhizinisi lakho — into entsha yefomu ofuna ukuyifinyelela, isiteshi esisha okudingeka ube yingxenye yaso — ubuchwepheshe obusekela ibhizinisi lakho bungashintsha ngokufanele.
Bheka ukukhuphuka kwezimakethe eminyakeni engu-2-3 edlule. Izimakethe zinganikeza nge-value-add yangempela kubathengi. Abathengi bangathola konke abakudingayo endaweni eyodwa futhi, njengebhonasi eyengeziwe, bangathola amaphuzu okuthembeka noma bonge izindleko zokuthumela ngasikhathi sinye. Futhi, bavula amathuba ezinto ezifana nezincomo zomkhiqizo ezihambisanayo ezingakhuphula umuzwa womkhiqizo wabo noma ziqhubeke nokwenza lula ulwazi lwabo lokuthenga, zombili zinikeza inani elingaba namandla kakhulu kubathengi. Inzuzo yebhizinisi yalobu buchwepheshe isuselwe enzalweni yomthengi futhi ixhuma ngqo kunqubo yokwenza ngezifiso ephumelelayo — kunesizathu sokuthi izimakethe zisuswe muva nje.
Kepha ukuzama ukuletha isisombululo semakethe endaweni yesikhulumi esivele sikhona kungaba yinselele. Noma yibuphi ubuchwepheshe obusha buzothatha umsebenzi ukuze bulunge, kepha ukwethula ubuchwepheshe obusha kuhlelo olukhona lwe-monolithic kungenza ukuthi kungenzeki. Isisombululo ngasinye sinabasebenzi nesikhathi nemali okubandakanyekile. Ukuguquguquka kwendlela yokwenza okuhle, okuhle kakhulu okunikezwayo, noma kunjalo, kusho ukuthi sonke leso sikhathi nomsebenzi kanye nemali ngeke kulahleke lapho kufanele ulungise ukuhlangabezana nezidingo zabathengi.
Ukwenza ngezifiso akukwenzanga kuze kube manje, kepha kuyakwazi. Sidinga nje ukuhlakanipha ngokuthi sibusebenzisa kanjani ubuchwepheshe obuyivumelayo. Sidinga ukusetha isisekelo esiqinile sokusetshenziswa kwedatha ngoba sisekela zonke izici zokwenza ngezifiso, futhi sidinga ukuqinisekisa ukuthi izakhiwo esithembele kuzo ukusekela indlela yokwenza ngezifiso ziyakwazi ukuyisekela. Okubaluleke kakhulu, sidinga ukugxila kumasu agxile kubasebenzisi. Noma yiliphi isu elenziwa ngokwezifiso elibeka ukufunwa kwebhizinisi ngaphambi kwezidingo zomsebenzisi lilungele ukuntenga futhi lihluleke.
Cela Idemo Ehlanganiswayo
Tags: CDPiyahlanganiswaIpulatifomu Yedatha Yamakhasimendeezokuhweba ngekhompyuthaukwenza ngezifiso i-ecommercemyplanetomnichannelukuzenzelaisu lokwenza ngezifisoidatha yesikhathi sangempelaUkwenza ngezifiso kwesikhathi sangempelartd